विहे नगरी ग’र्भवती बन्न चाहाने यी युवतीको इच्छा कसले पुर्याईदिने? – News543Online
September 17, 2021 adminLeaveaComment on विहे नगरी ग’र्भवती बन्न चाहाने यी युवतीको इच्छा कसले पुर्याईदिने?
काठमाडौ। पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु। तर, म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न, न त म आमा नै बन्न चाहान्छु।
यसै कारणले मैले सेरोगेट मदर बन्ने निर्णय लिएँ, जसकारण प्रसुतीपछि मलाई बच्चा मसँगै राख्न नपरोस्। सेरोगेट आमा बन्ने विचार म २१ बर्ष हुँदा नै आएको थियो।
म खाली गर्भवती हुनुको अनुभव लिन चाहान्छ्। म यति बुझ्न चाहान्छु, एउटा बच्चा मेरो शरीरभित्र कसरी विकसित हुन्छ र म उसलाई आफ्नो गर्भभित्र कसरी हुर्काउन सक्छु रु म आफ्नो शरीरमा आउने परिवर्तनलाई हेर्न चाहान्छु, महशुस गर्न चाहन्छु। मेरो छाला कसरी तन्किन्छ हेर्न चाहान्छु। म आफ्नो शरीरभित्र रहेको बच्चाको हलचललाई महशुस गर्न चाहान्छु।
मैले सेरोगेसीका बारेमा फिल्ममा हेरेँ र इन्टरनेटमा यसबारे पढेँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो ‘म यही गर्न चाहान्छु।’ म एक लामो स’म्बन्धमा रहे । म जस्तै मेरो पूर्वप्रेमी पनि बच्चा चाहँदैन थिए, सेरोगेसीमा मेरो जति उनको लगाव थिएन। उसले कहिल्यै बुझेन म आफ्नो स्वास्थ्यलाई खतरामा राखेर किन गर्भवती हुन चाहान्छु, त्यो पनि यस्तो बच्चाको लागि जो मेरो हुँदै होइन।
तपाई जान्न चाहानुहुन्छ होला, म आफ्नो बच्चा किन चाहान्न रु सन्तान पाल्नु एक ठूलो जिम्मेवारी हो। मानसिक रुपले र आफ्नो करिअरलाई हेर्दै म यति ठूलो जिम्मेवारीका लागि तयार छु जस्तो मलाई लाग्दैन। थाहा छैन यस जिम्मेवारीका लागि कहिल्यै तयार हुन्छु वा हुन्न। म एक इभेन्ट कम्पनीमा काम गर्छु। यस बाहेक म एक क्रिएटिभ प्रोजेक्टका लागि पनि काम गरिरहेकी छु। यसका लागि म घण्टौँ काम गर्छ चाहान्छु।
बच्चालाई दूध खुवाउँदै गाडीमा यात्रा गरिरहेका बेला संसार छोडेकी महिलाको घर पुग्दा(भिडियो हेर्नुहोस्
विश्वमा प्रत्येक मिनेट ११ जनाको भोकका कारण मृत्यु